Ị̀ Chọrọ Ịma nke Bụ́ Eziokwu?
GỤỌ NKE Abbey Abua Acholi Afrikaans Ahanta Albanian Albanian Sign Language Altai American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Assamese Ateso Attié Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Belize Kriol Bengali Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Bolivian Sign Language Boulou British Sign Language Bulgarian Bulgarian Sign Language Bété Cakchiquel (Western) Cambodian Carib Catalan Cebuano Central Alaskan Yupik Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuukese Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Damara Dangme Danish Danish Sign Language Digor Diola Douala Drehu Dusun Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Edo Efik Emberá (Catío) English Estonian Estonian Sign Language Ewe Fante Faroese Fataluku Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Fon Frafra French French Sign Language Fulfulde (Cameroon) Ga Galician Garifuna Georgian German Ghanaian Sign Language Gitonga Gokana Greek Greek Sign Language Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guarani (Bolivia) Guatemalan Sign Language Guianese Creole Gujarati Gun Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Honduras Sign Language Huastec (San Luis Potosi) Hungarian Hungarian Sign Language Hunsrik Ibinda Icelandic Igbo Iloko Inakeanon Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Isoko Italian Italian Sign Language Itsekiri Iu Mien Ivatan Japanese Japanese Sign Language Jiwaka Jula Kabardin-Cherkess Kabiye Kabyle Kachin Kadazan Kalanga (Botswana) Kalenjin Kamayo Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khana Khasi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinaray-a Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Konkani (Devanagari) Konkani (Roman) Korean Kosraean Kpelle Krio Kryashen Kuhane (Subiya) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kurdish Sorani Kwangali Kwanyama Kyangonde Lakota Lamba Laotian Latvian Latvian Sign Language Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lithuanian Sign Language Lomwe Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Luxembourgish Macedonian Macua Madi Makasae Malagasy Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Mam Mambwe-Lungu Mangareva Manipuri Mapudungun Marathi Marquesian (Hiva Oa) Marquesian (Nuku Hiva) Marshallese Mashi Mauritian Creole Maya Mayangna Mayo Mazahua Mazatec (Huautla) Mbukushu Melpa Mentawai Mexican Sign Language Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mixtec (Huajuapan) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Nama Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali New Zealand Sign Language Ngabere Ngangela Nias Nicaraguan Sign Language Nicobarese Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Odia Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Palauan Panamanian Sign Language Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Pidgin (West Africa) Pilagá Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese Sign Language Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Páez Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chibuleo) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Tena) Rapa Nui Rarotongan Romanian Romanian Sign Language Romany (Macedonia) Romany (Northern Greece) Romany (Romania) Romany (Southern Greece) Rungus Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Réunion Creole Samoan Sango Saramaccan Sarnami Scottish Gaelic Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Serer Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Shuar Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Solomon Islands Pidgin Somali Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tarahumara (Central) Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Tigrinya Tiv Tlapanec Toba Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tuvinian Twi Tzotzil Udmurt Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Voru Wallisian Warao Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wichi Wolaita Wolof Xhosa Yacouba Yakutsk Yapese Yoruba Yukpa Zambian Sign Language Zande Zapotec (Guevea) Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zimbabwe Sign Language Zulu
EZIOKWU banyere gịnị? Banyere ụfọdụ n’ime ajụjụ ndị kasị mkpa ụmụ mmadụ jụtụrụla. Ikekwe, i chetụla banyere ajụjụ ndị dị ka ndị a:
Chineke ọ̀ na-eche banyere anyị n’ezie?
Ọ̀ dị mgbe agha na ahụhụ ga-akwụsị?
Olee ihe na-eme anyị mgbe anyị nwụrụ?
Ọ̀ dị olileanya ndị nwụrụ anwụ nwere?
Olee otú m ga-esi kpee ekpere Chineke anụ ya?
Olee otú m ga-esi nwee obi ụtọ ná ndụ?
Olee ebe ị ga-ahụ azịza nke ajụjụ ndị a? Ọ bụrụ na ị gaa n’ọ́bá akwụkwọ na n’ebe ndị a na-ere akwụkwọ, i nwere ike ịhụ ọtụtụ puku akwụkwọ ndị na-ekwu na ha ga-azali ha. Ma, ihe otu akwụkwọ kwuru na-adịkarị iche n’ihe ibe ya kwuru. Ndị ọzọ na-eyi ka hà bara uru ugbu a ma ka oge na-aga, a naghịzi eji ha akpọrọ ihe, a na-edezigharịkwa ha ma ọ bụ were ọzọ dochie ha.
Ma, e nwere otu akwụkwọ nwere azịza ndị ị pụrụ ịdabere na ha. Akwụkwọ ahụ na-ekwu eziokwu. N’ekpere Jizọs Kraịst kpegaara Chineke, o kwuru, sị: “Okwu gị bụ eziokwu.” (Jọn 17:17) Taa, ihe anyị ji mara Okwu ahụ bụ Baịbụl Nsọ. Na peeji ndị ga-eso nke a, ị ga-ahụpere otú Baịbụl si zaa ajụjụ ndị ahụ a jụrụ n’elu n’ụzọ doro anya, azịza ndị ahụ bụkwa eziokwu.
IHE MERE E JI AJỤ AJỤJỤ A: Anyị bi n’ụwa obi ọjọọ na ikpe na-ezighị ezi juru. Ọtụtụ okpukpe na-akụzi na ahụhụ ndị anyị na-ata bụ uche Chineke.
IHE BAỊBỤL NA-AKỤZI: Chineke anatụghị akpata ihe ọjọọ. Job 34:10 kwuru, sị: “Ya bụrụ Chineke ihe arụ ime ihe ọjọọ, Ya bụrụ Onye Pụrụ Ime Ihe Niile ihe arụ ime ihe n’ụzọ na-ezighị ezi!” O nwere ezi ihe Chineke zubeere ụmụ mmadụ. Ọ bụ ya mere Jizọs ji kụziere anyị ikpe ekpere, sị: “Nna anyị nke bi n’eluigwe, ka . . . alaeze gị bịa. Ka uche gị meekwa n’ụwa, dị ka ọ na-eme n’eluigwe.” (Matiu 6:9, 10) Chineke na-eche nnọọ banyere anyị nke na o mere ihe dị ukwuu iji hụ na nzube ya ga-emezu.—Jọn 3:16.
Gụọkwa Jenesis 1:26-28; Jems 1:13; na 1 Pita 5:6, 7.
IHE MERE E JI AJỤ AJỤJỤ A: Agha ka nọ na-egbu nde kwuru nde mmadụ. Ọ dịghị onye n’ime anyị ahụhụ ụmụ mmadụ na-ata na-emetụtabeghị.
IHE BAỊBỤL NA-AKỤZI: Chineke kwere nkwa na oge ga-abịa mgbe ya ga-eme ka udo dịrị n’ụwa niile. N’Alaeze ya, nke bụ́ ọchịchị ga-achị site n’eluigwe, ụmụ mmadụ “agaghị amụkwa otú e si alụ agha.” Kama nke ahụ, ha ‘ga-akpụgharị mma agha ha ka ha bụrụ mma ogè.’ (Aịzaya 2:4) Chineke ga-eme ka ikpe na-ezighị ezi na ahụhụ niile kwụsị. Baịbụl kwere nkwa, sị: “[Chineke] ga-ehichapụkwa anya mmiri niile n’anya ha, ọnwụ agaghị adị ọzọ, iru uju ma ọ bụ mkpu ákwá ma ọ bụ ihe mgbu agaghịkwa adị ọzọ. Ihe mbụ niile [nke gụnyere ikpe na-ezighị ezi na ahụhụ ndị dị taa] agabigawo.”—Mkpughe 21:3, 4.
Gụọkwa Abụ Ọma 37:10, 11; 46:9; na Maịka 4:1-4.
IHE MERE E JI AJỤ AJỤJỤ A: Ihe ka ọtụtụ n’okpukpe ndị e nwere n’ụwa taa na-akụzi na mgbe mmadụ nwụrụ, ọ dị ihe na-esi n’ime ya apụ ma nọgide na-adị ndụ. Ụfọdụ kweere na ndị nwụrụ anwụ nwere ike imerụ ndị dị ndụ ahụ́ ma ọ bụ na Chineke na-ata ndị mere ihe ọjọọ ahụhụ ruo mgbe ebighị ebi site n’ịtụba ha n’ọkụ ala mmụọ.
IHE BAỊBỤL NA-AKỤZI: Mgbe mmadụ nwụrụ, ọ na-akwụsị ịdị adị. Ekliziastis 9:5 kwuru, sị: “Ndị nwụrụ anwụ amaghị ihe ọ bụla ma ọlị.” Ebe ọ bụ na ndị nwụrụ anwụ amaghị ihe ọ bụla, ha enweghị ike imerụ ndị dị ndụ ahụ́ ma ọ bụ nyere ha aka.—Abụ Ọma 146:3, 4.
Gụọkwa Jenesis 3:19 na Ekliziastis 9:6, 10.
IHE MERE E JI AJỤ AJỤJỤ A: Anyị chọrọ ịdị ndụ, anyị chọkwara ka ndị anyị hụrụ n’anya soro anyị dịrị ndụ. Ọ bụ ihe kwesịrị nnọọ ekwesị na ọ na-agụ anyị agụụ ịhụ ndị anyị hụrụ n’anya nwụrụ anwụ ọzọ.
IHE BAỊBỤL NA-AKỤZI: A ga-akpọlite ihe ka ọtụtụ ná ndị nwụrụ anwụ n’ọnwụ. Jizọs kwere nkwa na ‘ndị nọ n’ili ncheta ga-apụta.’ (Jọn 5:28, 29) Dị ka Chineke zubere na mbụ, ụmụ mmadụ a ga-akpọlite n’ọnwụ ga-enwe ohere ịdị ndụ n’ụwa paradaịs. (Luk 23:43) Nkwa a Chineke kwere maka ọdịnihu pụtakwara na ụmụ mmadụ na-erube isi ga-enwe ahụ́ ike zuru okè ma dị ndụ ebighị ebi. Baịbụl kwuru, sị: “Ndị ezi omume ga-enweta ụwa, ha ga-ebikwa n’elu ya ruo mgbe ebighị ebi.”—Abụ Ọma 37:29.
Gụọkwa Job 14:14, 15; Luk 7:11-17; na Ọrụ 24:15.
IHE MERE E JI AJỤ AJỤJỤ A: Ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ ndị nọ n’okpukpe niile na-ekpe ekpere. N’agbanyeghị nke ahụ, ọtụtụ ndị na-eche na a naghị aza ekpere ha.
IHE BAỊBỤL NA-AKỤZI: Jizọs kụziiri anyị ịghara ịdị na-ekwughachi otu ihe mgbe niile n’ekpere anyị. O kwuru, sị: “Mgbe ị na-ekpe ekpere, ekwughachila otu ihe ugboro ugboro.” (Matiu 6:7) Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka Chineke nụ ekpere anyị, anyị aghaghị ikpe ya otú ọ chọrọ. Iji mee nke ahụ, ọ dị anyị mkpa ịmụta ihe bụ́ uche Chineke ma mee ka ekpere anyị kwekọọ na ya. Jọn nke Mbụ 5:14 kọwara, sị: “Ihe ọ bụla nke anyị rịọrọ ya dị ka uche [Chineke] si dị, ọ na-anụ olu anyị.”
Gụọkwa Abụ Ọma 65:2; Jọn 14:6, 14; na 1 Jọn 3:22.
IHE MERE E JI AJỤ AJỤJỤ A: Ọtụtụ ndị kweere na ha ga-enwe obi ụtọ ma ha nwee ego, bụrụ ndị a ma ama, ma ọ bụkwanụ maa mma. N’ihi ya, ha na-achụso ihe ndị dị otú ahụ—ma mesịa chọpụta na ha enweghị obi ụtọ.
IHE BAỊBỤL NA-AKỤZI: Jizọs kwuru ihe ga-eme ka anyị nwee obi ụtọ mgbe o kwuru, sị: “Obi ụtọ na-adịrị ndị maara mkpa ime mmụọ ha.” (Matiu 5:3) Naanị ihe ga-eme ka anyị nwee ezi obi ụtọ bụ anyị ịmalite igbo mkpa kasị ukwuu anyị nwere—ya bụ, agụụ ịmata ihe bụ́ eziokwu banyere Chineke na nzube ya maka anyị. Eziokwu ahụ dị na Baịbụl. Ịmata eziokwu ahụ ga-enyere anyị aka ịmata ihe dị mkpa n’ezie na ihe na-adịghị mkpa. Ọ bụrụ na anyị ekwe ka eziokwu Baịbụl na-eduzi mkpebi ndị anyị na-eme na ihe ndị anyị na-eme, nke ahụ ga-eme ka anyị nwekwuo obi ụtọ ná ndụ.—Luk 11:28.
Gụọkwa Ilu 3:5, 6, 13-18 na 1 Timoti 6:9, 10.
Ihe anyị tụlere ebe a bụ azịza Baịbụl maka naanị ajụjụ isii. Ị̀ chọrọ ịma karịa ole ahụ? Ọ bụrụ na i so ná ndị “maara mkpa ime mmụọ ha,” o doro anya na ị ga-achọ. O nwere ike ịbụ na ị na-eche banyere ajụjụ ndị ọzọ, dị ka: ‘Ọ bụrụ na Chineke na-eche banyere anyị, olee ihe mere o ji kwere ka ihe ọjọọ niile merela n’ụwa mee, kwekwa ka ụmụ mmadụ taa ahụhụ niile ha tarala? Olee otú m nwere ike isi mee ka ezinụlọ m dịkwuo mma?’ Baịbụl zara ajụjụ ndị a na ọtụtụ ndị ọzọ otú ga-eju onye ọ bụla chọrọ azịza ha afọ.
Ma, ọtụtụ ndị taa na-ala azụ ịgụ Baịbụl. Ha na-ele ya anya dị ka nnukwu akwụkwọ na-esi ike nghọta mgbe ụfọdụ. Ị̀ ga-achọ ka e nyere gị aka inweta azịza nke ajụjụ ndị a na Baịbụl? Ndịàmà Jehova nwere ngwá ọrụ abụọ nwere ike inyere gị aka.
A haziri nke mbụ, bụ́ akwụkwọ aha ya bụ Gịnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi? iji nyere ndị na-anaghị enwe ohere aka ịtụle otú doro anya Baịbụl si zaa ajụjụ ndị dị oké mkpa. Nke abụọ bụ ndokwa ịmụrụ ndị mmadụ Baịbụl n’ebe obibi ha n’efu. Onyeàmà Jehova bi n’ógbè gị nwere ike ịbịa n’ụlọ gị ma ọ bụ n’ebe ọzọ ị chọrọ ma jiri nkeji ole na ole kwa izu kụziere gị Baịbụl n’anaghị gị ego. Ndokwa a enyerela ọtụtụ nde mmadụ aka gburugburu ụwa. O meela ka ọtụtụ n’ime ha nwee obi ụtọ ma sị onwe ha: “Achọtala m eziokwu!”
Ọ bụ akụ̀ kasị dị oké ọnụ ahịa mmadụ nwere ike ịchọta. Eziokwu Baịbụl na-eme ka anyị nwere onwe anyị pụọ na nkwenkwe ụgha, mgbagwoju anya, na egwu na-enweghị isi. Ọ na-eme ka anyị nwee olileanya, nwee nzube ná ndụ, nweekwa ọṅụ. Jizọs kwuru, sị: “Unu ga-amarakwa eziokwu ahụ, eziokwu ahụ ga-emekwa ka unu nwere onwe unu.”—Jọn 8:32.
Baịbụl kwuru na Chineke dị, ma è nwere ihe ndị anyị ji n’aka gosiri na ọ dị n’eziokwu?
Ikpe ekpere otú Chineke chọrọ ga-eme ka ọ za ekpere gị.
Ò Nwere Ajụjụ Gbasara Baịbụl Ị Ga-achọ Ịma Azịza Ya? Ị Ga-amata nke Bụ́ Eziokwu Ebe A.